ULwesihlanu, February 18, 2022 NgoMsombuluko, Februwari 21, 2022 Douglas Karr
Sakhe isiza sakwaShopify Plus sekhasimende elinezilungiselelo eziningi zezitayela zalo kufayela letimu yangempela. Nakuba lokho kunenzuzo ngempela ekulungiseni izitayela kalula, kusho ukuthi awunalo ifayela le-static cascading style sheets (CSS) ongalinciphisa kalula (ukwehlisa usayizi). Kwesinye isikhathi lokhu kubizwa ngokuthi yi-CSS compression kanye nokucindezela i-CSS yakho. Iyini i-CSS Minification? Uma ubhalela ishidi lesitayela,